I-Pisa Pelle Italian Leather
Rhuma kwaye ugcine
Fumana ikhowudi yesaphulelo eyimfihlo kwi-imeyile yakho.
zonke iindidi zonke iindidiIzixhoboIkhefunekliphuisikhwamabambaumntu onqamlezayoItyala lexwebhuisikhwamalaptopumthunywaemagxenihambaesiswiniisikhwama
I-FKP ye- £
Imveliso ye-GMD D.
Ngena kwiakhawunti yam
Ngenisa i-imeyile kunye negama lokugqitha:
Yakha iakhawunti yakho
Phinda usebenzise igama eligqithisiweyo
Ngenisa i-imeyile yakho:
Buyela kwi login
Nceda ugcwalise le ngcaciso ingezantsi:
Thenga iimveliso zethu
Yenziwe ngesandla eTuscany, e-Itali
Thenga iingxowa zesikhumba sase-Italiyane ezinamaxabiso aphezulu
Ivenkile Clutch Bags
Ivenkile yeeNgxowa zamagxa
Ivenkile yeeNgxowa zaMadoda
Ivenkile Ukuhamba Iingxowa
UPisa Pelle unomdla wezinto ezenziwe ngesandla kunye nezobugcisa. Sineengcibi ezibalaseleyo eTuscany, e-Itali. Ummandla waseTuscany wase-Italiya yintliziyo kunye nomphefumlo wemveliso yesikhumba etofotofo kunye neemfihlo zorhwebo ezigqithiswayo kwizizukulwana.
Iimfihlo zoSapho zidlulisa imbali
Ixesha lokuphuma, ukuqhubela phambili kunye namandla ombuso wasedolophini kwi-Medieval yase-Italiyindawo efanelekileyo yokuqhuma kwesikhumba. Kwenziwa imibutho yokukhusela ubuchule obufihlakeleyo obusetyenziselwa ukuvelisa izikhumba ezisemgangathweni ezingalinganiyo kwenye indawo emhlabeni. Obu buchule buseyimfihlelo yosapho ekhuselekileyo, enikezelwe kwizizukulwana ngezizukulwana kwiindawo zokufihla okubalaseleyo emhlabeni eziye zaveliswa ngaphezulu kwesiqingatha seminyaka. Namhlanje i-Itali ihlawula malunga neepesenti ezili-16 zokuveliswa kwesikhumba kunye nangaphezulu kwesibini kwisithathu sayo yonke imveliso yesikhumba eYurophu.
Izixhobo eziPhezulu zoMgangatho kunye nokuNikwa kweNkcukacha
Ezi ziimpawu, ezenza ukuba indalo yethu inyaniseke kwaye imele ubugcisa beTuscan.
Ukugqwesa kwemveliso kuthi kusisiphumo phakathi kwesiko kunye namaxabiso exesha lethu.
Injongo yethu kukufumana imveliso, ehlangabezana neemfuno zanamhlanje zokuguquguquka kunye ne-ergonomic.
Isingxobo sekhompyuter sisidingo kubomi bethu bemihla ngemihla, ukongeza kwi-PC sinokuba namaxwebhu, idayari kunye nezinye izinto eziyimfuneko emsebenzini okanye kufundo. Bu ...
Ixesha lehlobo: isikhwama esibomvu okanye isikhwama esiluhlaza okwesibhakabhaka?
Xa imozulu efudumeleyo isiza ekugqibeleni kwaye imihla ihambe ixesha elide, imibala emnyama iyaphela, ishiya indawo yeetoni ezikhanyayo, ezinempilo, ezihlawuliswe amandla ...
Isithili esiLawulayo seFlorence
Isithili sezikhumba kunye nesihlangu eTuscany siyinyani yokubaluleka kwamazwe aphela, ukugqwesa kwezinto ezenziwe e-Itali ...
Malunga nePisa Pelle
IPisa Pelle yeyenkampani yentengiso yaseMelika kunye nentengiso esekwe eTexas. UPisa Pelle unomdla wezinto ezenziwe ngesandla kunye nezobugcisa. Sifumene iingcibi ezibalaseleyo eFlorence nasePisa, iTuscany Region yase-Itali. UFlorence yintliziyo nomphefumlo wemveliso yesikhumba ebutofotofo kunye neemfihlo zorhwebo ezidluliswayo kwizizukulwana. Sikhethe abathengisi bethu ngokusekwe kumgangatho obalaseleyo kunye nonxibelelwano olukhulu ukusinceda ukuba sinikezele ngenkonzo ebalaseleyo kubathengi. Sithumela emhlabeni wonke. Kwisithuba seveki siza kusebenza kumazwe ahlukeneyo angama-30 kwilizwekazi ngalinye ngaphandle kweSouth Pole. Inkonzo yabaThengi yinto ephambili kuthi. Kuba ngaphandle kwakho siza kuphuma kwishishini. Nceda usilandele kwi-Instagram nakwi-Facebook.
Umbhalo, i-imeyile okanye umnxeba: + 1 214-444-9482
American Express Apple Pay zokudlela Club Discover Ewe Google Pay JCB Mastercard PayPal Ivenkile Hlawula Venmo ivisa